San Htun's Diary: June 2012
Purdue သွား ‌တောလား...
Purdue သွား တောလားဆိုလို့ Purdue မြို့ကို သွားလည်တယ် ထင်ရင် မှားပါတယ် ခင်ညာ။ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ သွားဖြေမယ့် မခိုင်က ရောက်ဖူးတယ်ရှိအောင် လိုက်ခဲ့ဆိုတာနဲ့ Indiana University Purdue University Fort Wayne (IPFW) ကြီးကို မရည်ရွယ်ဘဲ ရောက်ဖူးသွားပါတယ်။ အင်ဒီယားနားပြည်နယ်မှာ Indiana University Purdue University က အင်ဒီယားနားပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော် Indianapolis နဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ Fort Wayne မှာ တက္ကသိုလ် ၂ခု၊ Purdue University က West Lafayette ၊ Richmond ၊ Hammond ၊ Columbia City မှာ တက္ကသိုလ်တွေ ရှိပါတယ်။ စန်းထွန်း အခုတက်နေတယ့် တက္ကသိုလ်ရဲ့ Computer Science ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ Greg Guthrie က Purdue University ကျောင်းထွက်။ Purdue University က ကမ္ဘာအဆင့် ၆၂ ။ IPFW ရဲ့ Ranking ကို ရှာတာ မတွေ့ပေမယ့် သေချာတာကတော့ Ivy Tech Community College ထက် ဝင်ခွင့်ခက်ပါတယ်။
မခိုင် စာမေးပွဲဖြေနေတယ့် ၂နာရီအတွင်း ကျောင်းတခွင်အနှံ့ ခြေဆန့်ပါတော့တယ်။ ရောက်ဖူးတယ့် တက္ကသိုလ်ထဲမှာ ဒီတက္ကသိုလ်က အလှဆုံး။ ကိုယ်ရောက်ဖူးတာကလည်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်၊ ဒဂုံတက္ကသိုလ်၊ National University of Singapore (NUS) ၊ Nanyang Technological University (NTU) ၊ University of Iowa ။ University of Iowa ထဲက ဘောလုံးကွင်းကြီးကတော့ ပြောစမှတ်တွင်တယ်။
Kinnick Statdium in University of Iowa
၁၉၂၉ မှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၃၉ Heisman Trophy ဆုတံဆိပ်ရှင် Nile Kinnick ကို ဂုဏ်ပြုကာ Kinnick Statdium လို့ အမည်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ University of Iowa ထဲက ကျောင်းတကျောင်းဖြစ်တယ့် University of Iowa Hawkeyes အားကစားတက္ကသိုလ်ရဲ့ အိမ်ကွင်းပါ။ ကောလိပ်ကျောင်းက ပိုင်ဆိုင်တယ့် အကြီးဆုံးအားကစားကွင်း ၂၀ထဲမှာ တခုအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။
တက်ခဲ့ဖူးသမျှ တက္ကသိုလ်တွေထဲမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၂၃၊ အာရှအဆင့် ၃ ရှိတယ့် NUS ကို အကြိုက်ဆုံး။ အာရှအဆင့်၁က Hong Kong Univeristy of Science and Technology (HKUST) ၊ အဆင့်၂က University of Hong Kong (HKU)။ NUS Alumnus ဖြစ်ရတာကို ဂုဏ်အယူဆုံး။
အာရှအကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်၁၀၀မှာ ဂျပန် ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်က တက္ကသိုလ်တော်တော်များများ ပါပါတယ်။ စင်္ကာပူ၊ ထိုင်း၊ အိန္ဒိယ၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်က တက္ကသိုလ်တွေက နည်းနည်းပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှမှာ တက္ကသိုလ်အများဆုံးရှိတယ်ဆိုတယ့် မြန်မာပြည်က တက္ကသိုလ် တခုတလေများ ပါလေမလားလို့ ရှာကြည့်တာ ၁၀၀သာ ဆုံးသွားရော၊ မျက်စိများ ရှမ်းလေသလားမသိ။ မတွေ့မိပေါင်ဗျာ။
၂၀၁၁ ဇွန်လ နွေရာသီ ပူပြင်းတယ့် နေရောင်ခြည်အောက်မှာ သစ်ပင် စိမ်းစိမ်းစိုစို၊ ပန်းပွင့် အရောင်စုံစုံ၊ မြစ်ရေစီးသံ တသွင်သွင်နဲ့ တကယ့်ကို သာယာလှပပါပေတယ်။ အဆောက်အဦးတွေ၊ လူသွားလမ်းလေးတွေ၊ ထိုင်ခုံလေးတွေနဲ့သူ့နေရာနဲ့ စနစ်တကျ သေသပ်လှလို့။ ဒီလိုကျောင်းမျိုးမှ ငါတက်ချင်တယ့်ကျောင်းလို့တောင် တွေးမိတယ်။ ကိုင်း.. ဟိုရိုက်ဒီရိုက် လက်ရာများကို သည်းခံကာ ရှုစားကြပါ ခင်ညာ။
အစွယ်ပါတော့ ဟိုင်းဆင် မဖြစ်နိုင်။ စွယ်စုံဆင်လား မသိ။ ( ရမ်းတုတ်လိုက်သည် )
အစိမ်းရောင်ကြားထဲမှာ ဆန်းနေလို့ အလွတ်မပေးခဲ့။
Institute of System Science (NUS) ကျောင်းဘေးမှာလည်း ရှိတယ်။
စတိတ်က ရှဉ့်တွေကတော့ အကောင်ပိုကြီးတယ်။
နာမည်‌လေးနဲ့ လိုက်အောင် နှင်းဆီရနံ့‌တွေ မွေးထုံနေခဲ့တယ်
မမအိုင်အိုရာဆို မြင်တာနဲ့ ဘာငှက်အမျိုးအစား တန်းပြောနိုင်မယ်။
ကိုယ်ကတော့ ကြက်တူရွေး၊ သာလိကာ၊ ကျီးကန်း၊ ခို၊ ဇီးကွက်ပဲ သိတယ်...:P
နွေရာသီဆို ဒီပန်းတွေ နေရာတိုင်းမှာ တွေ့တယ်..ဓာတ်ပုံထဲမှာထက် အပြင်မှာ အရောင်ပိုစိုပြီး ပိုလှတယ်
ဆရာဖိုးကျော့ရဲh ဆင်ဖမ်းဝထ္ထုတွေ ဖတ်ရတိုင်း လက်ဖဝါးသာသာ ရေထဲမှာနေပြီး
မီးခြစ်ဆံသာသာလောက်ရှိတယ့် သူ့အစွယ်နဲ့ ထိုးလိုက်ရင်
ကုန်းဆင်ကြီး တုံးကနဲ ပစ်လဲကျစေတယ့် ဆင်အားလုံးကြောက်ကြတယ့်
ဆေးလိပ်လည်းတို နေလည်းညှိပြီ ငါ့ကို အိမ်ပြန်ပို့ကြပါတော့
ကောင်းကင်မှာလည်း ပျံတယ်၊ ရေပြင်မှာလည်း ကူးတယ်၊ မြေပြင်မှာလည်း လမ်းလျှောက်တယ်
ခွေကျောင်း၊ လူကျောင်းကြသော လမ်းကလေး
စည်းချက်ညီညီ ကခုန်နေသော မိုးမခပင်များ
ဇူလှိုင် ၄ အမေရိကန် လွတ်လပ်ရေးနေ့ မတိုင်မှီ ကျရောက်တယ့် ရာမားမွေးနေ့ကို ဆင်နွှဲဖို့ စန်းထွန်းတယောက် ဘော့စတွန်ကို ချီတက်ပါဦးမယ်။ မနှစ်က ဒီဇင်ဘာ Winter Break Holidays ကတည်းက ဘော့စတွန်သွား တောလားချင်တာ လေယာဉ်စရိတ် မတတ်နိုင်လို့ ခုမှပဲ တောလားရပါတော့တယ်။ ရာမားနဲ့လည်း မတွေ့ရတာ ၁၀လလောက် ရှိပါပြီ။
ကျောင်းသား ၄၉ယောက်၊ ကျောင်းသူ ၅ယောက်ပဲရှိတယ့် အတန်းမှာ မိုင်း၊ ဆူနမ်၊ စန်းထွန်း သုံးယောက်သား တညီတညွှတ်တည်း ပေးထားတယ့် ကွင်းက ရာမားပါ။ ဟင်းချက်ကောင်းတယ့် ရာမားလက်ရာ Sauce ကို ကြက်သွန်၊ ငရုတ်သီးပွနဲ့ ကြော်ထားတယ့် ဟင်းက ကိုယ်တွေ အမြဲတောင်းဆိုရတယ့် ဟင်းတခွက်။
Good Friday တုန်းက မိုင်းရယ်၊ ဆူနမ်ရယ်၊ စန်းထွန်းရယ် စားသောက်သမျှ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ဖေ့ဘွတ်တင်တော့ တယောက်တည်းဖြစ်တယ့် ရာမားက မနာလိုတိုရှည်ဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်းတောင် တက်မလာ။ အခုတော့ ဆူနမ်၊ ရာမား၊ စန်းထွန်း သုံးကောင်သား လောင်းကျော်သမျှ မိုင်းတယောက် မနာလိုတိုရှည် ဖြစ်မှာ မြင်ယောင်သေး။
ဇွန် ၂၈၊ ၂၀၁၂။
Den Moines သွား ေတာလား...
ခရီးသွားနိုင်ကြသူ မမကွန်၊ မမီးငယ်တို့ကို အားကျ၍ သွားချင်သော်ငြား မတတ်နိုင်သောကြောင့် လက်မှိုင်ချကာ နေရလေသည်။ တနေ့သ၌ ဓာတ်ပုံများ ရှင်းလင်းရင်း တမြန်နှစ်က ကျောင်းခရီးစဉ်ဓာတ်ပုံများကို တွေ့လိုက်ရသော အခါ၌ကား ဘလော့တွင် တင်ဖို့ အခွင့်ရလေပြီဟု လက်ခမောင်း ခတ်လေသည်။ အချိန်အခါသမယကား ၂၀၁၁ ဧပြီ ၅ အင်္ဂါနေ့ Spring Break Holidays ဆောင်းအကုန် နွေအကူး နေရောင်ခြည်ပွင့်လင်း သာယာလှပသော နေ့ကလေး ဖြစ်သည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
Den Moines ( ဒန် မွိုင်းစ်) သည် အိုင်အိုဝါပြည်နယ်၏ မြို့တော် ဖြစ်သည်။ Den Moines ခံတပ်ကို အတိုကောက် ခေါ်ဆိုရာကနေ မြို့အမည်တွင်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်ပြည်ရှိ Den Moines မြစ်အမည် မှည့်တွင်ထားခြင်း ဖြစ်မည်ဟု တွေးကြသည်။ မြို့တော်ကြီး၏ အဓိကလုပ်ငန်းသည် အာမခံလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ထင်ရှားသော အာမခံကုမ္ပဏီ အမြောက်အမြားရှိသည်။ Best Place for Business in 2010 ၊ No.1 - America's Best Cities for Young Professionals. ၊ No.9- 2008 Best Cities List ၊ No.1 - Greenest city ဆုတံဆိပ်များ ရရှိထားသည့် မြို့တော် ဖြစ်သည်။
ပထမဆုံး မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုသည် အမေရိကန်သမ္မတ မဲဆွယ်ပွဲအတွက် အရေးပါသောကြောင့် Den Moines မြို့တော်ကြီးတွင် ဌာနချုပ်ထားကာ မဲဆွယ်ပွဲများ စတင်ကြသည်။ ၂၀၀၇ The New York Times ဆောင်းပါးအရ မဲဆွယ်ပွဲများတွင် စိတ်အားထက်သန်မှု၊ အားပေးထောက်ခံမှုများကို Den Moines မြို့တော်ကြီးထက် သာလွန်ကောင်းမွန်သောနေရာမရှိ ဆိုသည်မှာ အငြင်းပွားဖွယ် မရှိဟု ဆိုသည်။
၁၈၈၆ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးသော Iowa State Capitol ကို သွားရောက် လည်ပတ်ကြသည်။ ရွှေရောင်အမိုးခုံးကို အမိုးခုံးလေးခုက ဝန်းရံထားသော Iowa State Capitol နှင့် Rhode Island State Capitol နှစ်ခု အိုင်အိုဝါပြည်နယ်တွင် ရှိသည်။ မြို့တော်ဝန်ရုံး၊ တရားရုံး၊ ငါးထပ်ရှိ ဥပဒေစာကြည့်တိုက်၊ သမ္မတကတော်အရုပ်များ ရှိသည်။ ခရီးသွားအဖွဲ့များ၊ ကျောင်းသားအဖွဲ့များ လာရောက်လည်ပတ်ကြသည်။ မြေအောက်ထပ်တွင် အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်၊ စပိန် - အမေရိကန်၊ ကိုရီးယား၊ ဗီယက်နမ် စစ်ပြန်များကို ဂုဏ်ပြုထားခြင်း၊ အမှတ်တရ ပန်းပုလက်ရာများ ရှိသည်။
ဘယ်လိုတည့်တည့် မရသောကြောင့် ခေါင်းကြီးစောင်းကာ ကြည့်ကြပါကုန်။
The Pappajohn Sculpture Park ကို ပို့ဆောင်ပေးသည်။ အနုပညာကို ဓာတ်ပုံရိုက်ရုံလောက်သာ ခံစားတတ်သော ငတိများကြောင့် ပန်းပုပညာရှင် လက်မှိုင်ချသွားလေသည်။
little world - Burma, China, Nepal, Vietnam, India, Perkistan, Jordan, Bosnia, American
ဤသို့ဖြင့် တရံရောအခါက အိုင်အိုဝါပြည်နယ် မြို့တော်ကြီးဆီသို့ ရောက်ဖူးခဲ့လေသည်။
ဇွန် ၂၂၊ ၂၀၁၂။
Happy Birthday Mother Su !
Open Letter Of Dr.Aye Chan to BBC Burmese
A Burmese’s (Myanmar’s) request to all Medias : “S...
May no Rohingya at Burma !